नागरिक सचेतनामा जोड – News Portal
September 10, 2019 epradeshLeaveaComment on नागरिक सचेतनामा जोड
दाङसहित देशभकार ४८ जिल्लामा डेंगुको संक्रमण फैलिएको छ भने डेंगुबाट देशभर अहिलसम्म करिब ४ हजार बढी नागरिक प्रभावित भएका छन् । पिउने पानी अभाव भएको क्षेत्रमा डेंगु संक्रमण बढी देखिएको छ ।
भाँडाकुडामा पानी संकलन गरे पनि छोप्ने गरेको पाइदैन । फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । सडकका खाल्डाखुल्डी, पुराना टायर, गमला, कुलरमा जमेको पानीमा लामखुट्टेले फुल पार्छन् । ती लामखुट्टेको टोकाइबाट रोग फैलिने गरेको छ ।
एडिस् जातको पोथी लामखुट्टेको टोकाईबाट सर्ने यो रोग महामारीमा रुपमा फैलिन थालेपछि नियन्त्रणका लागि सरकारी अधिकारी चिन्तित बनेका छन् । सरकारले लामखुट्टेको फुल एवं लार्भा खोज र नष्ट गर्ने अभियान सञ्चालनमा दुई वर्षमा झण्डै ११ करोड खर्च गरेको छ । नतिजा भने अपेक्षाकृत सन्तोषजनक देखिएको छैन ।
लामखुट्टेको वासस्थान नष्ट गर्न स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारले गरेको प्रयास प्रभावहीन देखिएको छ । दिनप्रतिदिन महामारीका रुपमा फैलिन थालेको डेंगुको नियन्त्रका लागि सरकारले प्रयास चालेपनि सरकारी प्रयास प्रभावकारी बन्न बन्न नसक्दा नागरिक पनि त्रासमा छन् ।
दाङमा पनि अहिलेसम्म करिब १० जनामा डेंगुको संक्रमण देखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । घोराही, तुलसीपुर, बबईलगायतका स्थानीय तहमा डेंगुबाट संक्रमित बिरामीमध्ये कहिले जिल्लाका निजी मेडिकलमा उपचार गरी फर्किएका छन् भने केही भारतसम्म पुगेका छन् । दाङमा अन्य जिल्लाको तुलनामा दाङमा कमि रहेपनि सचेत रहनुपर्ने अवस्था भने छ ।
डेंगु नियन्त्रणका लागि सरकारमात्रै भन्दा पनि नागरिक पनि सचेत रहनुपर्छ । हरेक नागरिकले आफ्नो घरवर पर ठाउँ सफामात्रै राख्न सक्ने हो भने डेंगु नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ । देशभरमा फैलिन थालेको डेंगु कस्तो रोग हो ? के अब नियन्त्रणमा ल्याउन के गर्नुपर्छ ? आदि विषयलाई आजको राउण्ड टेबलको यो अंकमा छलफल र बहसको विषय बनाएका छौं ।
स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख
घोराही उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १६, १७, १८ र १९ नम्बर वडामा डेंगुका बिरामीहरु भेटिएका छन् । संक्रमित बिरामीहरुको उपचार पनि भइसकेको छ भने केही उपचार गराउने क्रममा रहेपनि खतरामुक्त रहेको हामीले पाएका छौँ । घोराही उपमहानगरपालिकामा बिरामी देखिएपछि अहिले हामीले यसको न्यूनीकरणका लागि विभिन्न प्रयासको थालनी गरिसकेका छौँ ।
डेंगुबाट बच्न सर्वप्रथम त प्रमुख विषय त सरसफाई नै हो भने पानी जमेका खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम गर्नु बढी प्रभावकारी हुन्छ । यसकै प्रयासस्वरुप हामीले सोमबार हामीले विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरी आ–आफ्नो टोलमा डेंगु नियन्त्रका लागि के कस्ता प्रयास गर्न सकिन्छ र जोखिम न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा छलफल गरेका छौँ भने हामीले डेंगु महामारी रोक्ने अभियान समितिसमेत बनाएका छौँ ।
घोराही उपमहानगरपालिकामा १९ वटै वडाका वडा अध्यक्ष, स्वास्थ चौकी प्रमुख, स्वाथ्यकर्मी, पत्रकार, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेनालगायतको छलफलमा सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रमा डेंगु नियन्त्रणका लागि प्रयास गर्ने,
गाउँ टोलका संघसंस्थासँगै व्यक्तिलाई पनि डेंगुबाट बच्ने उपाय, रोग लागेको लक्षण थाहा पाउने अर्थात् टोलको सरसफाईमा जुट्ने विषयमा बृहत छलफलसमेत भएको छ र हामीले त्यसैअनुसारको योजना कार्यान्वयन गरी डेंगु नियन्त्रणका लागि प्रयासहरु थालेका छौँ । सोमबारको छलफलपछि सबैले टोल विकास संस्थासँग सहकार्य गरेर गाउँ, टोलको सरसफाई गर्ने प्रतिवद्धता पनि गराएका छाँै ।
हामी पनि निरन्तर लागेका छौँ । फैलिन सक्ने महामारीलाई मध्यनजर गर्दै उपमहानगरले नागरिक सचेतना पनि दिने प्रयास गरेको छ । हामीले डेंगु रोगबाट बच्न सकिने उपाय, रोगका लक्षणलगायतका विषयमा हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रचारप्रसार गरेका छौँ ।
महामारी नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन, गाउँ, टोल विकास संस्था, विद्यालय, आमा समूह लगायतलाई सचेतना दिने काम पनि गरिरहेका छौँ ।
विद्यालयस्तरमा शिक्षक, विद्यार्थीलाई डेंगुको बारेमा बताउने गरेका छौँ जसले गर्दा पनि रोगको संक्रमण फैलिन पनि नसक्ने र रोग लागि हालेमा पनि बिरामीले समयमै उपचार पाउने अवस्थाको सिर्जना गरेका छौँ ।
आतिहाल्नु पर्दैन् तर सचेत भने हामी हुनैपर्छ । किनभने रोग भनेको सानो ठूलो हुँदैन सानैबाट ठूलो महामारी फैलिन सक्ने हुन्छ । त्यसैले बेलैमा सचेत हुनुपर्ने आवश्यक छ ।
बिरामीको उपचारमा कमि हुँदैन्
कार्यकर्तामा एकता जागरण
पश्चिम दाङको विकासमा सडक
पर्यटन प्रवद्र्धनमा स्थानीय सरकार